Waa Kuma Safiirka cusub ee badalay Donald Yamamoto ee uu shalay magacaabay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waa Kuma Safiirka cusub ee badalay Donald Yamamoto ee uu shalay magacaabay...
Waa Kuma Safiirka cusub ee badalay Donald Yamamoto ee uu shalay magacaabay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday inuu magacaabay Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Larry Edward André Jr maalintii Khamiista, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Aqalka Cad. André wuxuu safiir ka soo noqday Mauritania iyo Djibouti. Markii ugu dambeysay wuxuu qabtay jagada Chargé d’Affaires ad ku meel gaar ah safaarada Mareykanka ee Juba, South Sudan.
André ayaa badali doona Donald Yamamoto, oo Danjire u ahaa Soomaaliya tan iyo bishii November 2018.
André wuxuu ka mid ahaa sagaal diblomaasiyiin uu madaxweyne Biden u magacaabay danjire khamiistii, magacaabistaasna waxay calaamad u noqon doontaa xulitaankii ugu horreeyay ee ergooyinka dibadda tan iyo markii uu xafiiska la wareegay.
André wuxuu kasbaday B.A. oo ka socda Claremont McKenna College iyo MBA oo ka socda Arizona State University / American Graduate School of International Management.
Larry André Jr waa dibloomaasi xirfad shaqo leh oo khibrad weyn ku leh Afrika. Waxaa loo magacaabay sagaal xafiis oo dibedda ah wuxuuna ka qabtay dhowr jagooyin sare dhammaan Waaxda Arrimaha Dibadda.
André wuxuu ku soo biiray Adeegga Dibadda 1990 isagoo qoraallo hore ka qoray Nigeria iyo Cameroon. Kadib wuxuu sarkaal sare ka noqday safaaradda Conakry, Guinea, 1998 ilaa 2000.
Wuxuu ka degay Geeska Afrika isagoo ah sarkaal deegaanka u qaabilsan Bariga Afrika, isagoo ka shaqeynayay safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa sanadihii 2000 ilaa 2002.
Wuxuu ku noqday Galbeedka Afrika isagoo noqday madaxa ergada safaaradda ee Freetown, Sierra Leone, intii u dhaxeysay 2002-2004.
Kadib ku dhowaad 15 sano oo uu ka shaqeynayay Afrika, André wuxuu ku laabtay Washington DC laakiin wuxuu ka sii watay Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Wuxuu soo noqday agaasime ku xigeenka Xafiiska Arimaha Galbeedka Afrika ee Xafiiska Arimaha Afrika sanadihii 2004 ilaa 2006.
Wuxuu ku soo noqday Bariga Afrika 2006, halkaas oo André uu la taliye siyaasadeed ka ahaa safaaradda U.S ee Nairobi ilaa 2008 halkaas oo uu u wareegay safaaradda Daarusalaam. André wuxuu ahaa Kuxigeenka Madaxa Ergada halkaas ilaa 2010.
André wuxuu ahaan jirey ergeyga iyo agaasimaha xafiiska ergeyga gaarka ah ee suudaan iyo koonfurta suudaan ee wasaarada arimaha dibada markii uu galay kaalinta koowaad ee safiirnimo bishii september 2014 markii madaxweynihii xiligaas ee Barack Obama u magacaabay inuu noqdo safiirka Mauritania.
Wuxuu ka shaqeynayay Nouakchott muddo seddex sano ah laakiin waxaa u wareejiyay Jabuuti Madaxweynihii hore Donald Trump sanadkii 2017. Wuxuu bedelay Tom Kelly, oo ka shaqeynayay Magaalada Jabuuti intii u dhaxeysay June 2014 ilaa January 2017.André wuxuu si fiican ugu hadlaa Faransiiska.
Previous articleMaamulada Hirshabelle iyo Galmudug oo musharixiinta u sheegay inay ka soo hor jedan mudo kororsiga, saxaafadana la hadlayaan goor dhaw
Next articleLiiska xildhibaanadi mudo xileed koodu dhamaadey ee saxiixay mooshinka muda kor dhinta Dalka Qal Qalka galisayi
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Ciidamada Booliska Dowlad goboleedka Jubbaland ay hawlgal ay ka sameyeen magaalada Kismaayo ku soo qabteen ragg...
Ra’iisal wasaare Rooble oo Cabdiwahaab Ugaas u magacaabay Wasiirka wasaaradda...
Ciidamo xoojin ah oo Haramcad oo la geeyey xarunta Baarlamaanka uu...